shaqo Computer iyo xirfadaha farsamada macluumaadka | USAHello | USAHello
shaqo Computer iyo warshadaha technology
Baro warshadaha technology oo kala duwan ee noocyada kala duwan ee shaqooyinka computer. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto in tiknoolajiyadda macluumaadka. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
Technology waa wax dadka qalab ay isticmaalaan si ay shuqul qaban. maanta, qalab ugu muhiimsan ee ku dhow kasta ganacsiga waa computer ah. Haddii aad isticmaali kartaa qalab muhiim this, aad shaqo ka heli kartaa. Waxaa jira shaqooyin computer badan oo shaqaale xirfad leh. shaqo ku daboolaa la warshadaha kale oo kasta, ka caafimaad si ay u martigalisa saarka. All warshadaha kuwaas oo u baahan dad leh xirfadaha kombiyuutarka.
Waa kuwee shaqo computer?
shaqo Computer waxaa inta badan loo yaqaan tiknoolajiyadda macluumaadka (IT). xirfadeed IT An raaci karaan Waddooyinkiisa badan oo kala duwan:
Koodh iyo barnaamijyada - barnaamijyo qor code in ka dambaysa barnaamij kasta. Tanu waa meesha haboon in laga bilaabo, maxaa yeelay tababarka waa si fudud la heli karo iyo waxa jira shaqooyin faro badan heer-galo.
Web sameeysa - maalmahan, ganacsi kasta u baahan yahay website a. Tani waa shaqo wanaagsan, haddii aad rabto in aad naftaada u shaqayso,.
Tababaraha Project – maamulayaasha mashruuca la isugu keeno oo loo fududeeyo kooxo aqoonyahano IT kala duwan. Waxay kaa caawin iyaga si ay si fiican u wada shaqeeyaan xagga a mashruuca / goolkii. Baro sida inuu noqdo tababaraha mashruuca IT ah.
Analytics iyo xogta - ganacsiga iyo aad u badan u isticmaalaan xogta ay lacag sameeyaan. saynisyahan xogta A lafaguraa xogta ay soo saaraan macluumaad waxtar leh ganacsiyada.
Ammaanka - xogta iyo ammaanka nidaamka muhiim ah in la ganacsiyada ugu. Waa beer dhakhso u kordhaya.
maamulaha - takhasusay IT iyo maamulayaasha network ayaa ka mas'uul ah ilaalinta shirkadda ee nidaamka shaqada. Waxay u hubiso shabakadda xiran yahay iyo samaynayaan wixii shaqaale u baahan.
macluumaadka caafimaadka farsamo (Hit) - farsamo macluumaadka caafimaadka ee dhowrayay nabadda diiwaanada caafimaad digital, sax ah, iyo ilaa taariikhda. Baro sida si ay u noqdaan farsamo ah macluumaadka caafimaadka.
software sameeysa - codsiyada qaadashada (apps) in qof kasta isticmaali kartaa ama caadada barnaamijyo mid ganacsi. Ciyaaraha iyo codsiyada kale ee casriga ah waa beeraha sii kordhaya.
Ma shaqo computer iyo warbixin technology shaqo sax ah ii?
technology Computer waa beer weyn shaqo helidda, sababtoo ah xirfadaha kombiyuutarka ku jira baahida weyn ee loo shaqeeyayaasha. Laakiin qof kasta oo aan doonayo inay ka shaqeeyaan on computer ah. Qaado imtixaanka is-qiimaynta a at careeronestop.org
Daawo kaaliyaha hadal barnaamij computer ah oo ku saabsan shaqada uu
Waayo, shaqo xirfad sare leh IT, loo shaqeeyayaasha ugu eegi doonaa waayo-aragnimo iyo shahaado. Laakiin waxaa jira heerar kala duwan oo tababar ah in ay qaataan waqti yar iyo waa ka badan ay heli karaan dadka cusub.
Code Academy - bartaan sireed on fudud ah, madal free
FreeCodeCamp.org - site kale oo lacag la'aan ah oo bixiya shahaado oo idin bara barnaamijyada by dhismaha mashaariic aan faa'iido. Waxaad ku biiri kartaa koox ee magaalada aad ku in ay la shaqeeyaan dadka kuu dhow.
Khan Academy - dhammaan noocyada kala duwan ee fasalada oo lacag la'aan ah, oo ay ku jiraan fasalo badan barnaamijyada computer
Sidee in la soo kiraystay oo horumarinta web - Dabcan gaaban ka Project Oden ah
kulliyado badan fasallada tababarka computer-jaban. Waxaa laga yaabaa in fasalada gaar ahaan loogu talagalay dadka cusub oo af Ingiriisiga baraneysa. Raadi college beesha kuu dhow.
Code.org ayaa database ka mid ah fasalada koodh degaanka. goobta sidoo kale kulan koodh, layliyada iyo ilaha waxbarashada ee waxbarashada da 'kasta.
Haddii aad haysatid shahaado technology ama shahaado ah computer science, Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo dadka haysta fiisada guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee dalka Mareykanka.
Halkan waxaa ku qoran dhowr siyaabood oo si aad u bilowdo shaqo raadintaada:
Isticmaal xarunta shaqada: xarumaha shaqada dawladda ee magaalo kasta waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka caawiyaan resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Hel shaqooyinka banaan: naftaada saaray Upwork, website ah wariyeyaasha ka shaqeeya online.
fiiri online: Dice takhasusay shaqooyin technology computer oo ay ku jiraan macluumaadka tiknoolijiyada, software, teknoolojiyad sare, ammaanka iyo bayoteknoolajiyadda.
Raadi koorsooyinka casriga ah ee aaggaaga iyo online at Launchcode
Eeg bogga internetka ee shirkadaha aad jeclaan lahayd in ay u shaqeeyaan
Baro oo ku saabsan Waddooyinkiisa mustaqbalkiisa kala duwan IT ee
Sidee inay ku guuleystaan ​​waraysigaaga